Akavigwa 1963, guva ndokufukunurwa 2020 | Kwayedza
Akavigwa 1963, guva ndokufukunurwa 2020
10 Jan, 2020 - 00:01	 2020-01-09T17:29:52+00:00 2020-01-10T00:08:41+00:00 0 Views
MWEYA wemurume akafa 1963 — mutumbi wake ndokuvigwa kumarinda eHighfield Cemetry, muHarare — unonzi wanga usina kugadzikana kwemakore 57 uri muvhu uchinzi unoti, ‘Ndakavigwa musango’’ kusvika vehukama vazofukunura marangwanda emushakabvu uyu ndokunoaviga patsva kumusha kuHurungwe.
Hama dzemufi uyu dzakafambira magwaro ose anodiwa kuti vafukunure marangwanda emushakabvu vakaawana.
Mutevedzeri wemutauriri wemapurisa mudunhu reHarare, Assistant Inspector Webster Dzvova, vanotsinhira nezvenyaya iyi vachiti marangwanda aMunhangu Munhangu akatofukunurwa mangwanani emusi weMuvhuro svondo rino akanovigwa patsva kuHurungwe padivi neguva remudzimai wake.
“Mufi, Munhangu Munhangu, uyo akaberekwa musi wa5 Kurume 1943 ndiye akavigwa kumarinda eHighfield Cemetry nemusi wa22 Mbudzi 1963 akapihwa guva rine nhamba dzinoti 7-A Sector nekanzuru yeHarare.
“Pane runyerekupe rwekuti pane zvinhu zvinogona kunge zvainetsa saka hama dzemufi dzakagara pasi dzikawirirana kuti marangwanda ake afukunurwe achiendeswa kumusha. Vakatevedza zvose zvinodiwa vakanyorera kwaRegistrar General’s Office pamwe nekumapurisa vachiti vanoda kunoradzika mufi uyu patsva padivi neguva remudzimai wake ndokupihwa mvumo.
“Saka neMuvhuro uno mhuri iyi, ichibatsirwa nasupavhaiza, vashandi vekanzuru uye nevekambani inoviga vafi (zita tinaro) vakaenda kumarinda ekuHighfield vakanofukunura marangwanda aya kubva na7 kusvika na10 dzemangwanani. Vakaenda nawo kubhuku raTanasi, kwaMambo Dandawa, kuHurungwe, uko vakanoaradzika patsva,” vanodaro.
Asst Insp Dzvova vanoti vamwe vevakabatsira mukufunurwa kwemarangwanda aya vanosanganisira mwana wemufi, Luckson Munhangu uye muzukuru wemushakabvu anonzi Michael Mahere nedzimwe hama.
“Marangwanda aya akaenda ari mubepa repurasitiki rinoiswa marangwanda rinodaidzwa muchirungu kuti ‘body bag plastic’ uye magwaro ekuviga mufi (burial order) ane nhamba dzinoti 2890-189.
“Pakufukunurwa kwese kwaiitwa mufi nekuvigwa kwake, panenge paine muongorori (supavhaiza),” vanodaro.
Zvisinei, pane mashoko asina kutsigirwa nevemhuri anoti mufi anga onetsa nenzira yechivanhu izvo zvakazoita kuti danho iri ritorwe.
“Zvinonzi mufi uyu anga achiti akavigwa musango, anoda kudzoswa mumusha zvinova zvakaita kuti pazotorwa danho iri,” anodaro mumwe anoziva nezvenyaya iyi.
Kwayedza haina kukwanisa kutaura nehama dzemushakabvu uyu nekuda kwenyaya iyi sezvo pakasvika vatori venhau kumarinda ekuHighfield aya, vainge vatosimuka kuenda kuHurungwe nemarangwanda acho.Asi Sekuru Friday Chisanyu — avo vanova nyanzvi munyaya dzechivanhu vari zvekare mutungamiriri wesangano reZimbabwe National Practioners Association (ZINPA) — vanoti zvinoitika kuti mweya wemufi umuke kana achinge avigwa nenzira isiriyo kana kuti panzvimbo isina kukodzera.
“Tine muyenzaniso yevanhu vakafira kuChibondo, kuNyadzonya kana kuChimoio avo vakasvika pakufukunurwa paine rubatsiro rwemasvikiro nekuti mweya yavo haizorore kana vachinge vakavigwa musango. Hongu, vanhu vari kuvigwa mumakuva emumaguta nenzira yechirungu, asi pachivanhu tinonyanya kukoshesa kumusha kunova kune madzinza edu.
“Munhu uyu kana akatonoradzikwa padivi neguva remudzimai wake mumusha medzinza rake anowana donhodzo, mweya wake wozorora murugare pasina zvinonetsa.
“Zvekare, munhu akafa aine shungu kana kuti akaitwa zvekupondwa, anogona kumukira vakamuponda kana kubudira pahama dzake dzepedyo semudzimu asi vamwe vanogona kutouya kuri kuhope vachitaura,” vanodaro.
Kuchiti Bishop Cuthbert Nyaruvenda, avo vanotungamirira chechi yeSangano Dzvene Revapositori, vanoti kereke yavo inocherechedza chivanhu uye tsika nemagariro.
“Kwedu kana munhu akavigwa panzvimbo isiriyo, hama dzake nevechechi vanoenda vononokora ivhu repaguva rake vouraya mbudzi. Musoro wembudzi ndiwo unozonovigwa pamwe chete nevhu repaguva riya kumusha kwake, vanhu vachitochema nekudeketera kuti asazomuka achinetsa vapenyu. Izvi tinozviita kutevedza chivanhu chedu zvisinei nekuti hazvimo mumagwaro matsvene ebhaibheri.
“Chero ukanamata sei, uri munhu ane dzinza nemutupo wako chinova chivanhu chako nekuti kudenga hakuna mutupo. Saka chivanhu chinotoitwa pano pasi.
“Asi kana zvisingaite kuti afukunurwe, tinongoita minamato tokusha mvura paguva kuti mweya wake uzorore,” vanodaro.
Ishe Ngezi, VaPeter Pasipamire, vekuMhondoro-Ngezi vanoti mapfupa emunhu anofukunurwa zvichiitwa zvose pamutemo nechivanhu.
“Kana vanhu vachida kufukunura hama yavo, vanokumbira magwaro kumapurisa nehutungamiriri hwenzvimbo yacho sekumadzishe nemasabhuku.
“Panotorwa mapfupa panorevererwa kana kudeketerera mweya wemunhu achiudzwa kuti tava kukubvisa pano tichiekuendesa kumusha nekuti mweya wemunhu haurovi.
“Tasvika panzvimbo yekuradzika marangwanda, kunoitwa mabiko echivanhu chekumutambira mumusha orevererwa mweya wake zvekare kuti tava kukuradzika apa. Kana chivanhu chikasaiitwa, vanhu vanonetswa nemweya wemufi vachiita rushambwa kana kurasikirwa nemabasa chaiko.
“Guva rinenge rabviswa mutumbi harivigwi mumwe munhu kana kutengeserwa vamwe vanhu kunyangwe riri remumaguta, asi rinoiswa dombo rofutsirwa nekuti rinenge richitori nemweya wemufi kana tichitarisa nguva yaakagara imomo akaworeramo,” vanodaro.